Magaalada Hargeysa oo Lagu Daahfuray Barnaamij Cusub oo la Magac Baxay Ardaa – Goobjoog News
Magaalada Hargeysa waxa lagu daahfuray barnaamij lagu magacaabo Ardaa oo ah aragti cusub oo la doonayo in lagu xoojiyo kaalinta haweenku ku leeyihiin horumarinta dhaqaalaha , waana kulan weyne oo ay iskugu imanayaan ganacsato ka socota mandiqadda bariga Afrika.
Barnaamijkan oo hal maalin ka soconaya Hargeysa una gudbaaya Garoowe waxyaabaha diirada lagu saarayo waxa ka mid ah;
-Aqoonsiga kaalinta haweenku kasoo qaateen horumarinta ganacsiga iyo dowrkooda dib u dhiska magaalooyinka .
-Midaynta xiriirka ka dhexeeya haweenka ganacsatada Soomaalida.
-Inay haweenku is weydaarsadaan xogaha horumarin ganacsiga .
-Inay is dareensiiyaan kaaalinta horumarka ay ilaa hadda haweenku ka gaareen ganacsiga.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay shirkadda Asal Consulting waxa ka soo qaybgalay ganacsato ay horkacayso Dr Amina Xirsi Mooge oo ah haweenay Soomaaliyeed oo maalqabeen ka ah bariga afrika fadhigeeduna yahay Uganda.
Wasiirka deegaanka Somaliland Shukri Baandare Ismaaciil iyo wasiir ku xigeenka warfaafinta Shukri Xariir Ismaaciil ayaa kulankan haween ahaan ugu matalaayey Somaliland, waxaana ka hadleen kaalinta looga baahanyahay inay haweenku ka qaataan horumarinta ganacsiga.
Barnaamijkani ayaa ahaa hal maalin oo qura, iyadoo kulanka kan xiga lagu wado inuu ka qabsoomo magaalada Garoowe ee caasimada Puntland kaas oo isna ay haweenku iskugu imandoonaan.
Gawjab cslchi Best price for cialis cost of cialis
Cwezmx membzj Viagra best buy cialis price walgreens
Yeyowv ieioka rx pharmacy best online pharmacy
Nazikp ykeagq canadian pharmacy Kgvyu
try this look at this now discover more...
prednisone 10 mg https://bvsinfotech.com/...